ထူးချွန်သောအလုပ်လျှောက်သူများ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်း (၇) ခု - Myanmar Network
ထူးချွန်သောအလုပ်လျှောက်သူများ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်း (၇) ခု
Posted by Soe Soe Win on January 28, 2016 at 11:04 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
သင် ၀န်ထမ်းတွေကို အင်တာဗျူး လုပ်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုန်ုပ်လဲ တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ အလုပ်သစ်တွေလုပ်ဖို့အတွက် ၀န်ထမ်းပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ကို အင်တာဗျူးလုပ်ဖူးပါတယ်။
အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့နေရာမှာ သင့်ဝန်ထမ်းကို "ဘာမေးချင်တာရှိသေးလဲ" ဆိုပြီး ပြန်မေးတာဟာ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ မေးခွန်တစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်မေးခိုင်းလို့ မေးလိုက်ပေမယ့်လည်း အများစုက သင့်ရဲ့အဖြေကို ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကိုသာ ပိုပြီး အနှစ်သာရရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးဖို့ကိုသာ မျှော်လင့်တတ်ကြတာပါ။ သူတို့အတွက်ကတော့ သင်ဘာဖြေလဲဆိုတာထက် သူတို့ ဘာမေးမလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီးသွားပါပြီ။
ဒါပေမယ့် လူအချို့ကတော့ ဒီလို အခြေအနေကို အလေးထားတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော်တဲ့ ၀န်ထမ်းလောင်းတွေကတော့ သင့်ကိုမေးခွန်းတွေမေးပြီး သူအတွက် သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိ ဆိုတာတွေကို သိဖို့ သင့်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သတ်တာတွေကို မေးမြန်းမှာပါ။ (အတော်ဆုံး ၀န်ထမ်းလောင်းတွေမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမြင်တွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်။)
ထူးချွန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို လေ့လာနိုင်ဖို့ အောက်မှာ သူတို့မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်း ၇ခုကို ပေးထားပါတယ်။
၁။ ပထမဆုံးရုံးတက်တဲ့ ရက် (၉၀) အတွင်းမှာ ကျွန်တော့်ဆီက ဘာတွေလုပ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါသလဲ။
တကယ်တော်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ စပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကတည်းက ထူးချွန်နေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံကို သိဖို့ ရသတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ၊ လပေါင်းများစွာ အချိန်မဖြုန်းတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ သင်တန်းတွေမှာ အချိန်ကုန်မခံတတ်ကြပါဘူး။
သူတို့ဟာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အရာတွေကို ဖန်တီးပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
၂။ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လိုချင်တဲ့ အဓိက အချက်သုံးချက်က ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ထူးချွန်တဲ့ဝန်ထမ်းလောင်းတွေဟာ အတော်ဆုံးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ လုပ်တိုင်းမှာ မတူညီတဲ့အချက်တွေ ရှိနေတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုလည်း သူတို့က နားလည်ထားကြသလို သူတို့မှာ ဒီလုပ်ငန်းကို လည်ပတ်နိုင်တဲ့ အဓိကအရည်အသွေးတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိနားလည်ကြပါတယ်။
အချိန်ပြည့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲရှိနေခြင်းဟာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်။ နည်းပညာထက် ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ဟောင်းတွေနဲ့ ရည်ရှည်ဆက်ဆံရေးထက် ဖောက်သည်အသစ်တွေကို ရှာဖွေရတာဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသစ်ဝင်လာတဲ့ ဖောက်သည်တွေကို အဆင့်မြင့်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပေးတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထူးချွန်တဲ့ ၀န်ထမ်းလောင်းတွေဟာ ၁။ သူတို့နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အသစ်မှာ သဟဇာတဖြစ်မဖြစ်သိချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သဟဇာတဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲ၊ သူတို့ အကောင်းဆုံး ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို သိချင်ကြပါတယ်။
၃။ ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ အကျိုးအမြတ်က ဘာဖြစ်မလဲ။
၀န်ထမ်းသစ်တွေခန့်ထားတယ်ဆိုတာဟာ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ၀န်ထမ်းတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် လစာကောင်းကောင်းရဖို့ကို မျှော်လင့်ကြမယ်ဆိုတာကို သင်သိနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ အခြားသောအရာတွေထက်ပိုပြီး ကွဲပြားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ HR( လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်) အဖွဲ့ကို အလုပ်သစ်တွေဖန်တီးတာထက် သင့်တော်တဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေရှာဖွေပေးတာကို ပိုပြီးလိုချင်မှာပါ။ ဒါဟာ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကောင်းပြီး၊ သင်တန်းတွေပေးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ စရိတ်တွေကိုလည်း သက်သာစေမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုနည်းပညာတွေဟာ ထိရောက်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းပညာတွေဟာ ပြသနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နဲ့ အခြားသော အကျိုးအမြတ်တွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ထူးချွန်တဲ့ ၀န်ထမ်းလောင်းတွေဟာ လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ သူတို့ဘ၀အောင်မြင်တိုးတက်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့လဲ ခံယူထားတတ်ကြပါတယ်။
၄။ ဒီနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဦးစားပေးရည်ရွယ်ချက်ကဘာများပါလဲ။ ကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်မယ့် အခန်းကဏ္ဍကရော ဘာများဖြစ်နိုင်မလဲ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အရေးပါမှုဟာ ရှိသင့်သလား။ ဒါဟာဖြစ်သင့်သလား။ ထူးချွန်တဲ့ ၀န်ထမ်းလောင်းတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ၀င်ရောက်ကြတာဖြစ်သလို၊ သူတို့လို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြသူတွေနဲ့သာ အတူကွ အလုပ်လုပ်ချင်ကြပါတယ်။
၅။ လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ကို အလုပ်အသစ်ထဲခေါ်မှာပါလဲ
သူတို့ရဲ့အလုပ်ကို ချစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အာမခံချက်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းက ထူးချွန်တဲ့ အခြားဝန်ထမ်းတွေကို ဒီလိုနဲ့ပဲ လုပ်ငန်းခွင်အသစ်ကို ခေါ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ လုပ်ငန်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ ဦးဆောင်နိုင်သူကိုရနိုင်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ သူတို့အခြင်းခြင်းအတွင်း စည်းရုံးမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ တိုးတက်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုအနေအထား စတာတွေကို တည်ဆောက်ရင်း အခြားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အသစ်များကို သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာနိုင်အောင် ရှေ့ဆောင် လမ်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
၆။ အားလပ်ချိန်မှာ ၀န်ထမ်းတွေ ဘာတွေလုပ်ခွင့်ရှိပါသလဲ။
သူတို့ဘာလုပ်ခွင့်ရတယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့ လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာတွေကို သိရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်သောဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံချက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ ဖြေကိုဖြေရမယ့် မေးခွန်းပါ။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ လုပ်ငန်းငယ်တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ပြောတဲ့စကားတွေဟာ ယေဘူယျဆန်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ (၀န်ထမ်းအချို့ကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အားလပ်ချိန်မှာ သူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကို ပြောသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်လိုဆိုတာကို ကောင်းကောင်းမသိတာမျိုးဖြစ်နေပါမယ်။)
ထူးချွန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ သင့်လျှော်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုအတွက် လိုက်ဖက်ညီနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလဲ ယဉ်ကျေးမှုခြင်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးလှပါတယ်။
၇။ လုပ်ငန်းအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိလျှင် သင့်ရဲ့ အစီအစဉ်တွေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ နည်းပညာစိမ်ခေါ်မှု၊ ပြိုင်ဖက်တွေရဲ့ စိမ်ခေါ်မှု၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်း အပြောင်းအလဲ စတဲ့ကြီးမားတဲ့ စိမ်ခေါ်မှုတွေကို ကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။
အချို့သောဝန်ထမ်းတွေဟာ နောက်ထပ် လုပ်ငန်းကြီးတွေဆီမသွားခင်မှာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို အတွေ့အကြုံတစ်ခုလို သဘောထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင်းမဟုတ်ပဲ အလုပ်ကထွက်သွား ချိန်မှာတောင် ဒီအတွေ့အကြုံကို အခွင့်အရေးတစ်ခုလို မြင်တတ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းတွေကို အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့အချိန်မှာ အခြားတစ်နေရာမှာလည်း စတိုးဆိုင်အတွက်ခေါ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါအားပြိုင်မှုအတွက် သင့်အင်တာဗျူးမှာ မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ စားသောက်ကုန်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းကို ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖွင့်ထားဆိုပါစို့ စားသောက်စရိတ် တက်လာတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာမျိုးတွေကို မေးသင့်ပါတယ်။
ထူးချွန်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်ရှင်တွေ ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာကို သိချင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ရှင်တွေမှာ ဘယ်လိုစီမံကိန်းတွေရှိလဲဆိုတာကိုပဲ သိချင်ကြသလို ဒီစီမံကိန်းနဲ့ သူတို့ဟာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မဖြစ်ကိုသာ သိချင်ကြတာပါ။
Inc.com မှ Jeff Haden ရဲ့7Questions Only the Smartest Job Candidates Ask ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Phyo Min Thu on January 28, 2016 at 12:54
That is really great for all of applicant.
But I would like to comment to asked about of the organization chart during interview process. Because some organization and companies didn't show organization structure in vacancy. So applicants need to know about of the organization structure especially related with their position.
Permalink Reply by Myat Kay Thwe on April 10, 2016 at 19:42
Permalink Reply by htaylim on January 29, 2016 at 7:26
Permalink Reply by Naing Tun Win on February 18, 2016 at 17:26
Permalink Reply by aungzawoo on April 9, 2016 at 23:37